Canicula: kedu ihe ọ bụ, njirimara, mbido ya na nsonazụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu maka meteorology, enwere ụdị ihe dị iche iche nwere ike ịpụta kwa afọ ma nwee ọpụrụiche na njirimara. Taa, anyị ga-ekwu maka Ọrịa Canicula. Aha a na - ebuli nkịta ma na ịnọ ebe ahụ yiri ka esi na mmịpụta "ụbọchị nkịta gara aga". Ọ bụ ezie na nkịta enweghị ihe jikọrọ ya na ihe okpomoku pụtara. Dogbọchị nkịta bụ oge ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma na-ezo aka na kpakpando Silvio dị na kpakpando Canis Maior, nke n'oge a na-enwu karịa na mbara igwe.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe canicula bụ, ihe njirimara ya na mbido ya.
2 Oge canicula na Spain
3 Okpomọkụ na ebili mmiri na canicula
4 Akwa okpomọkụ
Mgbe oge ọkọchị rutere, ìgwè kpakpando ahụ na-eru ọkwa kachasị elu nke ọtụtụ ijeri na mbara igwe. Ọdịdị nke Sirius mere ka ndị nna ochie maa jijiji dịka ọ pụtara na ọ ga-adị oke ọkụ. A maara ya dị ka ihe na-acha ebube. Otu ìgwè kpakpando a, nke na-enwu gbaa, echere na ọ ga-eweta okpomọkụ karị na anyanwụ. Ha abụọ webatara onyinye nke mere ka ụbọchị ndị ahụ bụrụ nke kachasị ewu ewu n'afọ niile. Taa ụbọchị kachasị ewu ewu adabaghị na ịrị elu heliacal nke Sirius, nke emere na mbido Septemba. Otú ọ dị, canicula abanyela ọdịnala ahụ nke na ọ ka na-eji ya.
Oge canicula na Spain
Canicula abụghị ihe ọzọ karịa oge statistically kacha sie ike na afọ. Na Spain anyị nwere ụbọchị kachasị mma nke afọ n’agbata July 15 na August 15. Mmalite ya adabaghị na mmalite oge ọkọchị bụ naanị ihe, kama ọ dị n'etiti. Eziokwu na nke a na-eme n'ụzọ dị otú a bụ isi n'ihi ihe atọ. Anyị ga-enyocha nke bụ isi ihe na - eme ka oge ọkọchị ghara ịdaba na ọkọchị astronomical:
Na ụbọchị ndị a anwu na-enwu na ugwu uwa karia ka o dighi oge obula. Nke a na - eme ka ụzarị anyanwụ chara acha. Ọchịchọ anyanwụ na-adịkarị ala karịa n'oge oyi, ya mere ọ na-ebute oke radieshon karị. Mgbe izu ole na ole jiri ọnọdụ a gasịrị, ala na-ekpo oke ọkụ ma na-eme ka okpomọkụ dị ọkụ. Ka anyị ghara ichefu na ọ bụrụ na anyị agbakwunye na mmetụta agwaetiti a na-ekpo ọkụ nke obodo, ha nwere ike ịghọ okpomọkụ a na-apụghị ịnagide.
Oké osimiri nwere okpomọkụ dị elu karị ma ihe omume ya na-amalite ịda mbà. Anyị maara na oke osimiri na-ewe ogologo oge iji mee ka ọnọdụ ikuku nke ikuku dị. Ikuku na-ajụkarị oyi ma ọ bụ na-ekpo ọkụ karịa oké osimiri. Ya mere, a ghaghị iburu n'uche na ka anwụ na-acha wee kpoo oke osimiri dum, oge zuru ezu gafere maka ya.
Izu ole na ole tupu mgbe ahụ, nwere ndekọ dị ala karịa na ya, ọ na-enye ume ọhụrụ ikuku site na ikuku ikuku na n'oge ahụ ọ bụghị nke ukwuu.
Okpomọkụ na ebili mmiri na canicula
Buru n’uche na canicula abụghị otu ihe dị ka okpomoku ọkụ. Ọ bụ ezie na nke mbụ bụ oge nke na-eme ka ọnụọgụgụ ọkụ na nke na-adaba na otu ma ọ bụ obere otu ụbọchị kwa afọ, ebili mmiri nwere oke nkesa na enweghị nkesa. Ọ bụ eziokwu na n'ọtụtụ oge, ha na-adaba n'oge. Ọ bụ ihe nkịtị nke agbakwunyere na oge mgbakọ ọkụ ọkụ ọ nwere ike ịnwe ya na ebili mmiri ọkụ. Okpomọkụ a na-eme ka okpomọkụ dị elu na ọnụ ọgụgụ na-ekpo ọkụ karịa. Ọmụmaatụ, N’agbata July 23 na 25, 1995, okpomoku mere ka ihe ndekọ nke ogo 46 dị na ememe Seville na Córdoba.. Valueskpụrụ ndị a dị iche iche mana ha anọghị anya site na ogo 43-44 abụọ dị na ụbọchị ndị a. A na-ahụkarị ọnọdụ okpomọkụ a na ịda mba Guadalquivir.
Nọ n'etiti oge ọkọchị ọ bụ ihe dị mma maka temometa na-ebili ma mụbaa ọbụna karịa na obodo. A makwaara Canicula maka oge nke oge ọkọchị oge ọkọchị. Ọ na-ewekarị ihe dị ka ụbọchị 40 ma ọ bụ ebe enwere oke okpomọkụ na-ekpo ume.
Otu n'ime njirimara anyị nwere banyere canicula anyị na-ahụ ihe ndị a:
Okpomọkụ dị n'elu ogo 37: Ọnọdụ okpomọkụ ndị a nwere ike iwepụta ụfọdụ nsogbu ahụike maka ndị kachasị ngwangwa. Ọ bụ ezie na ebili mmiri dị egwu karịa ka ọ dị ọsọ ọsọ, ebili mmiri nwere ike ịdịgide na-adịgide adịgide.
Mbelata nke mmiri ozuzo: elu okpomọkụ na-egbochi ọgbọ nke igwe ojii mmiri ozuzo n'ihi ịrị elu nke ikuku ọkụ na mbelata gradient gburugburu ebe obibi.
Oké ikuku kpo oku: ikuku na-ekpo oke ọkụ nke na ọ na-esi n'otu ebe gaa na ebe ọzọ ngwa ngwa.
Kpakpando dị kpamkpam: metụtara ihe ndị ahụ e kwuru na mbụ. Okpomọkụ dị elu na-ebelata usoro mmiri ozuzo.
Na canicula ọ bụkarị ịchọta ọtụtụ obodo na Spain ebe temometa emetụ ma ọ bụ ọbụna gafere ogo 40. Cfọdụ amụma bụkarị ogo 45, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị gbakwunye nsonaazụ nke ọkụ ọkụ na ọkụ zuru oke. Igwe ndị a dị elu na-esonyere ọkụ na mmiri ozuzo. Oké ọkọchị bụ oge na-emetụta ahịhịa na mmiri ụmụ mmadụ na-ata.
N'ezie, ekwesịrị ịkọwa ya na mgbanwe ihu igwe na-emewanye ọnọdụ canicula kwa afọ. Nke ahụ bụ, enwere ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa ụbọchị 40 karịa ka canicula na-adịgidekarị.
Fọdụ ndụmọdụ a na-enye iji lụso ụbọchị nke oké okpomọkụ, bụ ndị a:
Zere iche ihu anyanwụ, ọ kachasị n’ehihie, nke bụ mgbe ụzarị anyanwụ nwere ọ̀tụ̀tụ̀ dị ala ma ọnọdụ okpomọkụ dị elu.
Na-aṅụ mmiri nọgidere zere akpịrị ịkpọ nkụ.
Rie nri ohuru
Tinye ude anyanwụ iji zere ọkụ
Jiri nche anwụ, Uwe dị mfe na okpu iji chebe onwe gị pụọ na anyanwụ.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere canicula na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Ọrịa Canicula